🥇 ukubalwa kwedeski losizo
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 450
Ividiyo yokubalwa kwedeski losizo
Oda ideski losizo lokubalwa kwezimali
Eminyakeni yakamuva, ukubalwa kwezimali kokusebenza kweDeski Losizo kuye kwalawulwa ngohlelo olukhethekile oluzenzakalelayo, oluvumela izinkampani ze-IT ukuthi zisebenze kakhulu ngezicelo nezikhalazo, zinikeze usizo ngempumelelo, zithuthukise futhi zithuthukise isevisi. Akuwona wonke amaphrojekthi ahlelelwe ukubhekana ngokukhethekile nezibalo, ukungaphazanyiswa ezinye izinkinga ezincane, ukushintsha ngokukhululekile phakathi kwezinqubo zeDeski Losizo, ukuthola ngokushesha isixazululo esilungile, futhi ungalayishi abasebenzi ngokweqile ngemisebenzi engadingekile.
Ubuchwepheshe Bedeski Losizo Oluthuthukisiwe oluvela ohlelweni lweSoftware ye-USU (usu.kz) buye bafunda kahle ngokwanele ukuze baqonde imboni, bazi mayelana namathrendi akamuva namazinga, futhi bakhiqize imikhiqizo efaneleke ngempela esebenza ngempumelelo futhi ekhiqizayo ekusebenzeni. Akuyona imfihlo ukuthi inhloso yesikhulumi ayikhawulelwe ku-accounting yokusebenza. Ibhekele futhi nezindaba zokuxhumana, iqaphe izikhundla zesikhwama sezinto ezibonakalayo, yakha itafula labasebenzi besakhiwo, izilungisele imibiko kanye nanoma yimiphi imithethonqubo. Amarejista eDeski Losizo aqukethe ulwazi oluyisisekelo mayelana nezicelo namakhasimende. Ulwazi lwe-accounting kulula ukulubonisa ezikrinini, ukushintshana ngolwazi nabanye abasebenzisi, nokudlulisela imibiko namadokhumenti. Asikho isidingo sokusebenzisa izinhlelo zezinkampani zangaphandle. Uma kucatshangelwa, kunezinkinga, abasebenzi abahlangabezani nezinsuku zokugcina, azikho izinto ezidingekayo zokulungisa ukungasebenzi, khona-ke abasebenzisi bazoba ngabokuqala ukwazi ngakho. Kwanele ukwenza kusebenze imojuli yesaziso esakhelwe ngaphakathi futhi ungagcina izandla zakho ngokuphephile ku-pulse yabaphathi. Ukugeleza kwedeski losizo kuboniswa ngesikhathi sangempela. Ulwazi lwe-accounting lubuyekezwa ngamandla. Ngenxa yalokho, abasebenzisi bangasabela ezicelweni ngesivinini sombani, benze izinguquko, bafunde imibiko yakamuva yokuhlaziya futhi benze izinqumo zokuphatha. Izinkinga zokuxhumana kwamakhasimende nazo zivalwa ngempumelelo kusetshenziswa ukucushwa kwe-Help Desk. Kulula kakhulu ukushintshanisa idatha ye-accounting ngemojula yemiyalezo ye-SMS, bika imiphumela yakamuva yomsebenzi, ubike, unikeze izabelo, ukhangise izinsizakalo zezinhlangano. Ngokuhamba kwesikhathi, ukucushwa Kwedeski Losizo sekuyinto engashintsheki. Zisetshenziswa ngenkuthalo izinkampani eziholayo ze-IT ukuze ziqondise ukugcinwa kwamarekhodi okusebenza, zisuse amathuba amancane amaphutha nokunganembile, futhi zethule amathuluzi okuphatha kanye nenhlangano emisha. I-automation ibonakala iyisixazululo esingcono kakhulu sokuthuthukisa amapharamitha omsebenzi wezakhiwo, ukukhulula abasebenzi emthwalweni womsebenzi wansuku zonke, futhi ungachithi isikhathi esengeziwe ezinqubweni ezijwayelekile. Iphrojekthi ithuthuka ngamandla. Izengezo ezikhokhelwayo ziyatholakala. Uhlu oluhambisanayo lufakwe kuwebhusayithi.
Iplathifomu Yedeski Losizo iqapha izikhundla zesevisi nokusekelwa kobuchwepheshe, inesibopho semilayezo engenayo nezicelo, izinsuku eziwumnqamulajuqu, futhi ivala ukuxhumana namaklayenti. Ukugcina amarekhodi okusebenza kuba lula kakhulu uma izinkomba namakhathalogi adingekayo kuseduze. Kungenzeka ukugcina izingobo zomlando zedijithali. Isikhathi esisha sokubhalisa sokufaka isicelo sehliswe kakhulu. Inqubo yokufaka isicelo i-othomathikhi ngokugcwele. Ungathembela kumhleli owakhelwe ngaphakathi kuyo yonke into ehlobene nabasebenzi, izinsuku zokugcina zemihlangano, nezinhlelo zesakhiwo.
Ukucushwa kwe-Help Desk kusetshenziswe ngokugcizelela ukunethezeka kokusetshenziswa kwansuku zonke. Ngesikhathi esifanayo, uhlelo alubeki phambili izidingo ezikhethekile ngokwezinga lokufunda ngekhompyutha, amakhono, noma ulwazi.
Uma izinsiza ezengeziwe zidingeka ngokuphuthumayo emisebenzini ethile, khona-ke lolu lwazi lokubala luboniswa ngokushesha ezikrinini. Abasebenzisi bazoba ngabokuqala ukwazi ngakho.
Umsebenzi wesevisi uhlanganisa izigaba eziningana, ngasinye sazo esilawulwa ubuhlakani bokwenziwa. Kunikezwe ithuba lokuxhumana nesizinda samakhasimende ngokuthumela i-SMS ngobuningi. Ngeplathifomu Yedeski Losizo, kulula kunangaphambili ukushintshisana ngolwazi mayelana nezicelo ezitholiwe, ukuthumelana imibhalo, imifanekiso, imibiko, kanye nolunye uhlu lolwazi. Idatha yokubala yamamethrikhi okusebenza kwezakhiwo iboniswa ngokubonakalayo, esiza ukuthola ngokushesha izinkinga ezincane nokwenza izinguquko eziqondile. Ukwazisa abasebenzisi mayelana nemicimbi yamanje yenhlangano kwabelwa kumojula yedijithali ehambisanayo.
Ungazibi ikhono lokuhlanganisa namasevisi athuthukile namasevisi. Uhlu lushicilelwe kuwebhusayithi. Izinkampani eziningi ze-IT, osomabhizinisi ngabanye, izikhungo zesevisi, nezinhlangano zikahulumeni ezisiza abantu zithole lolu hlelo. Akuwona wonke ama-elementi athole indawo ekucushweni okuyisisekelo. Ezinye izinketho zethulwa ngokwehlukana. Sincoma ukuthi uzijwayeze nezici zokusebenza. Qala ngokuhlolwa ukuze wazi kangcono umkhiqizo, thola amandla, futhi uhlole ngokucophelela ubuhle nobubi. Namuhla, izinhlangano eziningi zibhekene nenkinga ephuthumayo, ehlanganisa isidingo sokunciphisa izindleko kanye nokuthuthukiswa okuqhubekayo kwekhwalithi yezimpahla nezinsizakalo ezinikezwayo. Esimeni samanje somnotho kanye nokuqiniswa kokuncintisana phakathi kwamabhizinisi, isidingo sokunciphisa izindleko noma izindleko zokukhiqiza kuphela umsebenzi onzima kakhulu. Ngamanye amazwi, ukubaluleka kokwenziwa ngcono kwenqubo kulele esidingweni sokuthuthukisa ukusebenza kahle kwamabhizinisi nezinhlangano, kucatshangelwa ukubamba iqhaza okuphansi kwabanikazi bamabhizinisi mayelana nokuthuthukisa izinqubo zebhizinisi. Ukubalwa kwezimali kweDeski Losizo kuyasiza.